अनुहारमा डन्डिफोर आउने कारण , यसरी पाउनुहोस् सधैँका लागि मुक्ति !! | सुदुरपश्चिम खबर
छालामा उत्पन्न हुने समस्या मध्य एक हो डन्डिफोर । डन्डिफोरले मानिसको सुन्दरतामा कमी ल्याउनुका साथै छालासम्बन्धी अन्य विभिन्न समस्या पनि निम्त्याउने काम गरिरहेको हुन्छ।
जसका कारण मानिसहरु डन्डिफोर आउन नदिन विभिन्न सावधानी अपनाइरहेका हुन्छन्। यो अत्यन्तै जरुरी पनि हुन्छ। डन्डिफोरबाट बच्नका लागि विभिन्न सावधानी अपनाउदा अपनाउदै पनि कहिले काही डन्डिफोर आउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई डन्डिफोरबाट छुटकारा पाउने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।के छ घरेलु उपचार विधि ?
कागतीः सौन्दर्यका लागि कागती उत्कृष्ट विकल्प हो । यसमा भिटामिन सि पाइन्छ । कागतीको रस प्रयोग गरेर अनुहार सफा गर्दा डन्डिफोरबाट छुटकारा पाइन्छ ।चामलः रातभर एक कप चामल भिजाएर राख्ने । बिहान पानी छानेर पिस्ने । त्यसमा केहि थोपा कागतीको रस चुहाइदिने । उक्त लेप डन्डिफोर भएको स्थानमा लगाउनुपर्छ, ठीक हुन्छ ।
लसुनः डन्डिफोरको प्राकृतिक उपचारको लागि लसुन फाइदाजनक हुन्छ । केहि लसुनको केस्रा पिसेर त्यसको रस निकाल्ने । उक्त रसमा कागतीको रस मिसाउनुपर्छ । त्यस मिश्रण अनुहारमा लगाएर १० मिनेटपछि सफा पानीले पखाल्नुपर्छ ।
रसायनयुक्त प्रसाधनको प्रयोग नगरौं= अनुहारको सौन्दर्यका लागि घरेलु उपचार मात्र काफी हुँदैन । हामी अनुहारमा अनेकौ कस्मेटिक प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ, जसले क्षणिक सौन्दर्य प्रदान गरेपनि दीर्घकालिन रुपमा हानी पु¥याउँछ । यस्ता रसायनयुक्त सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोगलाई घटाउनुपर्छ ।
घाममा निस्कनुअघि=घामको बिकिरणले अनुहारको छालामा सोझो असर पर्छ । त्यसैले घाममा वा खुला स्थानमा निस्नुअघि कपडा, माक्स आदिले अनुहार ढाक्नुपर्छ । चर्को घाममा सनग्लास, माक्स, स्कार्फको प्रयोग उपयोगी हुन्छ ।
स्वस्थ्य खानपान= अनुहारको सौन्दर्यका लागि मेकअप वा उपचारले मात्र पुग्दैन । खासमा पेट सफा राख्नुपर्छ । रगतको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यसमा लागि स्वस्थ्य खानपान आवश्यक हुन्छ ।पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गर्ने, फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने, सलाद, फलफूलको सेवन बढाउने । साथै चिल्लो, चाप्लो, मसलेदार, अमिलो, पीरो खानेकुरा छालाको सौन्दर्यका लागि अनुकुल हुँदैन । (gnewsnepal बाट सभार)